China လမ်းမကြီး Lighting China Manufacturers & Suppliers & Factory
လမ်းမကြီး Lighting - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 18 များအတွက်စုစုပေါင်း လမ်းမကြီး Lighting ထုတ်ကုန်များ)
သည်အခြားဓါတ်ငွေ့ဥတုမီးသီးများကဲ့သို့ high-ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်သည်, ဗို့၏အနုတ်လက္ခဏာဆင်ခြေလျှောနှင့်တကွ, ကို arc ရိနာစွဲပြည်နယ်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် - အမ်ပီယာဝိသေသကွေးအဆိုပါမီးသီးဗို့အားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်စဉ်က, မီးသီးလက်ရှိမြင့်တက်ဖြစ်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါ၏အခြေအနေအောက်,...
LED လမ်းမကြီး Lighting လမ်းအလင်းအိမ်
ဤရွေ့ကားလမ်းပေါ်မှာအားလုံးကို double-လက်မောင်းလမ်းမီးခွက်ဖြစ်လေ့ lamps နှင့်တပြင်လုံးကိုအချိုးကျလှပသည်နှင့်ဆီမီးခွက်၏ရေးသားချက်များ၏အရောင်တစ်နေ့တာအတွင်းတမြို့လုံးတစ်သွက်နဲ့သွက်ခံစားမှု add နိုင်သည့်, ကွဲပြားခြားနားသည်။ လူတွေကညအချိန်တွင်သွားလာရန်အဘို့အများ၏သင်တန်းညဥ့်အလင်းအိမ်မှာအကြီးအဆင်ပြေယူဆောင်,...
မြို့ပြလမ်းမ Lighting စီးရီး
high-ပါဝါ LED လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်, အနာမည်မှာအဖြစ်, တဦးတည်းဝပ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်တစ်ခုတည်းပါဝါနှင့်အတူလမ်းတစ်လမ်းမီးခွက်ဖြစ်၏။ လောလောဆယ် LED မီးခွက်၏ပျမ်းမျှ illumination, 0,42 ၏အစဉ်အလာအမျိုးသားရေးစံနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မား 0.48 ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်း illumination နှင့်ကိုက်ညီသောအရာ, 2: အဆိုပါညိုအချိုး 1 ဖြစ်ပါတယ်။...
ရေစိုခံနဲ့ LED လမ်းအလင်း
သင်တန်း၏, လူမီနီယမ်ဗိုင်းငင်၏အစဉ်အလာသံပစ္စည်းရှိပါတယ်အဲဒီအနည်းငယ်လမ်းပေါ်အလင်းအိမ်သို့မဟုတ်လက်မောင်းပုံစံ, ယခုလမ်းနှင့်တူမီးခွက်ဘုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လမ်းဆီမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မှု, လူမီနီယံအလွိုင်းပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းလှံတံကိုခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းလူမီနီယမ်ဗိုင်းငင်ပစ္စည်းရှိ...
မြင့်မားသောဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်သို့မဟုတ် LED လမ်းမီးခွက်ကိုကိုင်အထွေထွေအလင်းအရင်းအမြစ်ဤအနည်းငယ်လမ်းပေါ်အလင်းအိမ်လမ်းအလင်းရောင်ဘို့ကုန်းရေကွဲပြားခြားနားသောအလင်းရင်းမြစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပြီးထိုသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်လမ်းမီးခွက်သည်ဦးခေါင်းကို select ကိုကြိုးနဲ့တုတ်-In ဖြစ်ပါသည်,...
ဒါဟာအထက်သံမဏိ conical ဆီမီးခွက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အရပ်ရှည်ရှည်ပါဝါ 15 မီတာမှလေ့ type ကိုဆီမီးခွက်ဘောင်ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ကြောင်းသစ်ကိုစတိုင်အလင်းရောင် device ကိုညွှန်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ, ပြည်တွင်းရေးဆီမီးခွက်လျှပ်စစ်, တိုင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။...
မြို့ပြလမ်းမ Lighting လမ်းအလင်း
အခုဆိုရင်လမ်းအလင်းရောင်လမ်းဆီမီးခွက်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ဒါပေမယ့်လည်းလှပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများလိုက်စားအတွက် ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနား, လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြလမ်းအလင်းရောင်အတွက်, ရှုခင်းအလင်းရောင်၏လိုအပ်ချက်သည်လည်းရှိသေး၏။...
စမတ်စီးတီး Lighting ထုတ်ကုန်များ
အသိဉာဏ်အလင်းရောင်အလင်း "ပညာမွို့" chengxu [စမတ် "သင်ကတန်ဖိုးရှိနေ ChengXu ကတိကဝတ်ကိုငါတို့သညျအသှေးအာရုံစိုက်ကျနော်တို့ကြှနျုပျတို့သညျ "တရုတ်မှာရှိတဲ့ [မတ်ရန်" တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ် "မှတာပေါ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖို့ကြိုးစားကြသည်။ အသိဉာဏ်လမ်းမီး, လမ်းမီး, လမ်းမီးတိုင်, အသိဉာဏ်မီးအိမ်,...
နယူးလူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း Spinning
ပစ္စုပ္ပန်မှာအများဆုံးပြည်တွင်းပြင်ပအလင်းရောင်စျေးကွက်အဓိကအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးမှသာအနည်းငယ်ထိုကဲ့သို့သောနန်ကျင်းလမ်းမကြီးများ၏စီးပွားဖြစ်လူကူးလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုလူမီနီယံအလွိုင်းချည်ငင်ထမ်းဘိုး, citied စဉ် Shanghai.This, ပြည်တွင်းစားသုံးသူဈေးကွက် positioning ကိုဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်, သံဆီမီးခွက်ထမ်းဘိုးအပေါ်အခြေခံသည်...
LED Lighting ပစ္စည်းစီးရီး
ဤရွေ့ကားလမ်းပေါ်မှာမီးခွက်ကြောင့်ထူးခြားသောအသွင်အပြင်, စွမ်းအင်ချွေတာရေး၏အလင်းထိရောက်မှုအလွန်ရေပန်းစားသည်, ငါတို့၏ကုမ္ပဏီ၏ဝိသေသမြင့်မားသောဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျဖြစ်ကြသည်။ မြင့်မားသောဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်ကိုလည်းအစဉ်အလာလမ်းမီးခွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်,...
စွမ်းအင်ချွေတာနဲ့ LED လမ်းမကြီးအလင်း
သမားရိုးကျလမ်းမီးခွက်ကိုကိုင်လမ်းဆီမီးခွက် LED, ထို LED အလင်းအရင်းအမြစ်, Gan ပါဝါအမျိုးအစားဒြပ်ထိရောက်မှုအဖြူရောင်အလင်းဖြင့်အနိမ့်ဗို့အား DC power supply ချမှတ်အပြာရောင်အလင်း LEDs နှင့်အဝါရောင်, ထိရောက်လုံခြုံ, စွမ်းအင်ချွေတာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်, အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
LED Lighting ယဉ်ကျေးမှုခြံစည်းရိုး
ယဉ်ကျေးမှုဝိသေသလက္ခဏာများ, guardrail, အလင်းအရောင်နဲ့အမျိုးမျိုး, အရောင်ကြွယ်ဝသောဖြစ်ပါသည်, ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုဒေသခံယဉ်ကျေးမှုအတားအဆီးတွေအဆိုအရစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်အလင်းရောင် Guardrail တင်သွင်း, အလင်းရင်းမြစ်မျှတောက်ပ, ပျော့ပျောင်းသောအလင်းနှင့်အရောင် LED သည့်အတွက်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်နှင့်သတိပေးချက်များရှိ...
traffic signal ကိုအလင်းဒါဟာလမ်းအသွားအလာအခြေခံဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်, အသွားအလာနိမိတ်လက္ခဏာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ traffic အလင်းအိမ်နီအလင်း ([မျှ entry ကိုဆိုလိုသည် "), ([ကျမ်းပိုဒ်ကခွင့်ပြုသည်ဆိုလိုတာကအစိမ်းရောင်အလင်း"), ([သတိပေး "ကိုဆိုလိုသည်) ကိုအဝါရောင်အလင်း၏ဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းသို့ပြိုကွဲ: ။...
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း, အပေါ့ပါးဆုံးလူမီနီယမ်အလွိုင်း, လူမီနီယမ်အလွိုင်း Torchlight, Lightweight လူမီနီယမ်အလွိုင်း, နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး, လူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း Spinning Spinning ။ Conical လူမီနီယံအလွိုင်းချည်ငင်အလင်းရောင်တိုင်အဓိကအားဖြင့်တဦးတည်းအခြား spinning...
LED အနိမျ့အဆင့် Lighting အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
ဖွဲ့စည်းပုံ၏အနိမ့်အလင်းရောင်ဆီမီးခွက် series နှင့်မီးအိမ်အထက်တစ် guardrail တပ်ဆင်ခ၌တည်ရှိ၏မူထူးခြားတဲ့ပွဲစဉ်အလင်းလမ်းသို့မဟုတ်တံတားကုန်းပတ်ကို အသုံးပြု. အနိမ့် installation ကိုအမြင့်အတွက်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ် LED ပြင်ပခြမ်း railing တစ်ဦး၏ပုံစံအတွက်ရှုခင်းအလင်းရောင်၏ function ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် အမှတ်အရင်းအမြစ်,...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆီမီးခွက် seies အလင်းရောင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရိုးရာအလင်းရောင်အစားထိုးနေရောင်ခြည်အလင်းရောင်အင်ဂျင်နီယာအစိတ်အပိုင်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုပြင်ပမပါဘဲလမ်း, ဥယျာဉ်, ပန်းခြံ, ကျောင်း, ကုန်းနှင့်လယ်ပြင် etc..Applicable ချွေတာအသစ်တစ်ခုအလင်းအရင်းအမြစ် configuration များ,...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုများ, ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ, စင်ကြယ်သော pollutionfree နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, ဆုံးသောစင်ကြယ်သောအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအသုံးပြုခြင်း, စွမ်းအင်အတော်လေးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်လုံလောက်မှု, ရှည်သောအသက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။...
non-welded Lightweight လူမီနီယမ်အလွိုင်းချည်ငင်အလင်းရောင်တိုင်
လမ်းမကြီး Lighting LED လမ်းမကြီး Lighting စနစ် စမတ်စီးတီး Lighting လမ်း Lighting လမ်းမကြီး Lighting လမ်းမီး Holder အဆောက်အဦး Lighting Led လမ်းအလင်း လမ်းမကြီးလမ်းအလင်း Fittings
လမ်းမကြီး Lighting LED လမ်းမကြီး Lighting စနစ် စမတ်စီးတီး Lighting လမ်း Lighting လမ်းမကြီး Lighting လမ်းမီး Holder